Fampianarana ambony : Ny teti-bola ankapobeny, budget général no andoa ny karaman'ny mpiasa PAT
vendredi, 17 juin 2022 16:41
Vita ny alarobia 15 jona 2022 ny fiaraha-midinika ny fampidirana ireo mpiasan'ny Oniversité, na ny PAT, amin'ny fandoava-karam-panjakana amin'ny teti-bola ankapobeny, na ny budgét général, fa tsy eny anivon'ny oniversité intsony.
Ny tale jeneraly DGFAG sy ny Sekretera jeneralin'ny ministeran'ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa no nanokatra ny atrik'asa, izay narahana fanazavana ara-tekinika mahakasika ity fanovana mandeha any amin'ny teti-bola ankapobeny ity.
Oniversité 6, IST miisa 3 ary ny CROUA moa no nanombohana azy ity, ary mitohy amin'ireo sekoly ambony hafa miankina amin'ny fanjakana.
Efa tafiditra anatin'ny teti-bola nasiam-panitsiana ity taona ity moa izany fanovana izany.
Hiditra amin'ny filan-kevitry ny minisitra ny zoma 24 jona ho avy izao ny didim-panjakana mahakasika izany.
Ho hisy ny toerana tokana na guichet unique hikarakarana ny taratasy anafainganana izany, izay ho ambara tsy ho ela ny daty fandaminana azy.
Mahatratra 3 382 ny isan'ireo mpiasa PAT, izay anombohana io fanovana io.
Hanomboka ny volana jolay dia ho any amin'ny crédits de la Solde ny karaman'ireo PAT mpiasam-panjakana, ny EFa sy ELD, izay miisa 3300.
Ireo ECD sy contrat privé miisa 550 kosa, dia mbola misy dingana roa, dia ny fampidirana miasa na recrutement aloha, izay vao mandeha ny karama ny volana Aogositra amin'ny alalan'ity Teti-bola ankapobeny ity.
Hisy moa ny didim-panjakana ho soniavin'ny Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa sy ny Minisitry ny vola sy teti-bola anatanterahana izao fanovana izao, ka antenaina ho tapitra hatreo ny olana amin'ny fahataran'ny fandoavana ny karaman'ireto mpiasam-panjakana eny anivon'ny Oniversité sy sekoly ambony miankina amin'ny fanjakana izao.